Aurora Coin စျေး - အွန်လိုင်း AUR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Aurora Coin (AUR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Aurora Coin (AUR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Aurora Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
AUR – Aurora Coin
Market ကဦးထုပ်: $1 283 364.00
volume_24h_usd: $30 823.90
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Aurora Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Aurora Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Aurora CoinAUR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0426Aurora CoinAUR သို့ ယူရိုEUR€0.0362Aurora CoinAUR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0326Aurora CoinAUR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0389Aurora CoinAUR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.386Aurora CoinAUR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.269Aurora CoinAUR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.952Aurora CoinAUR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.16Aurora CoinAUR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0571Aurora CoinAUR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0596Aurora CoinAUR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.953Aurora CoinAUR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.33Aurora CoinAUR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.231Aurora CoinAUR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.2Aurora CoinAUR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.7.15Aurora CoinAUR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0585Aurora CoinAUR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0646Aurora CoinAUR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.33Aurora CoinAUR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.297Aurora CoinAUR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.51Aurora CoinAUR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩50.7Aurora CoinAUR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦16.15Aurora CoinAUR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.14Aurora CoinAUR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.18
Aurora CoinAUR သို့ BitcoinBTC0.000004 Aurora CoinAUR သို့ EthereumETH0.000116 Aurora CoinAUR သို့ LitecoinLTC0.000759 Aurora CoinAUR သို့ DigitalCashDASH0.000454 Aurora CoinAUR သို့ MoneroXMR0.000467 Aurora CoinAUR သို့ NxtNXT3.08 Aurora CoinAUR သို့ Ethereum ClassicETC0.00627 Aurora CoinAUR သို့ DogecoinDOGE12.86 Aurora CoinAUR သို့ ZCashZEC0.000473 Aurora CoinAUR သို့ BitsharesBTS1.69 Aurora CoinAUR သို့ DigiByteDGB1.61 Aurora CoinAUR သို့ RippleXRP0.149 Aurora CoinAUR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00148 Aurora CoinAUR သို့ PeerCoinPPC0.149 Aurora CoinAUR သို့ CraigsCoinCRAIG19.61 Aurora CoinAUR သို့ BitstakeXBS1.84 Aurora CoinAUR သို့ PayCoinXPY0.752 Aurora CoinAUR သို့ ProsperCoinPRC5.4 Aurora CoinAUR သို့ YbCoinYBC0.00002 Aurora CoinAUR သို့ DarkKushDANK13.8 Aurora CoinAUR သို့ GiveCoinGIVE93.14 Aurora CoinAUR သို့ KoboCoinKOBO10.16 Aurora CoinAUR သို့ DarkTokenDT0.0392 Aurora CoinAUR သို့ CETUS CoinCETI124.18
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 18:30:02 +0000.